Qarinta cinwaankaaga Noqo Istaraatiijiyadda haynta | Martech Zone
Qarinta cinwaankaaga Noqo Istaraatiijiyadda haynta
Axad, Agoosto 26, 2012 Axad, Agoosto 26, 2012 Douglas Karr
Waxaan qiimeynaa adeegyo badan si aan wax ugu qori karno baloogga ama ugu adeegno macaamiisheenna. Hal farsamo oo aan bilaabayno inaan aragno inbadan iyo in kabadan ayaa ah adeegyo kuu ogolaanaya inaad si fudud ku furto koonto, laakiin ma haystaan ​​qaab kasta oo lagu baajiyo. Uma maleynayo inay tani kormeer tahay… isla markiiba waxay ii celisaa shirkadda.
Waxaan qaatay qiyaastii 15 daqiiqo subaxnimadii taas. Adeeg la socodka baraha bulshada ayaa la siiyay a maxkamad bilaash ah markaa waan isqorey. Qiyaastii 2 usbuuc kadib, waxaan bilaabay inaan helo emayl iiga digaya in maxkamadeynteydii ay dhamaatay. 30 maalmood ka dib, waxaan bilaabay inaan helo emayl maalinle ah oo ii sheega in waqtigeygu dhacay oo aan xiriir la leeyahay meesha aan ku cusbooneysiin karo koontada lacag bixinta.
Iimaylka ayaa ah ka jooji linkiga ii keenay bogga galitaanka koontada. Grrr… inaad gasho si aad uga baxdo rukunka waa xayawaan kale oo xayawaan ah. Tan iyo markii aan galayay si kastaba, waxaan islahaa waan tirtiri doonaa koontada. Waxaan aaday bogga ikhtiyaariyada koontada xulashooyinka kaliya ayaa ahaa xulashooyin cusbooneysiin kaladuwan - ikhtiyaar lakin majiro. Xitaa daabacaadda wanaagsan.
Dabcan, sidoo kale ma jirin qaab lagu codsado taageero. Kaliya Su'aal. Dib u eegis deg deg ah oo ku saabsan Su'aalaha la Weydiiyo iyo wax macluumaad ah oo ku saabsan baajinta koontada. Mahadsanid, baaritaanka gudaha ee Su'aalaha La Weydiiyo ayaa bixiyay xalka. Xidhiidh la tirtiray oo lagu aasay tab aan mugdi ku jirin oo ku dhex jira astaanta isticmaalaha.
Tani waxay i xasuusineysaa warshadaha wargeysyada… halkaasoo aad inta badan iska qori karto khadka tooska ah, laakiin waa inaad soo wacdaa oo aad hakad ku sugtaa inaad la hadasho wakiilka adeegga macaamiisha si aad u joojiso rukunkaaga. Iyo… halkii ay ka joojin lahaayeen, waxay isku dayayaan inay ku siiyaan ikhtiyaarro kale oo aad ku qorto iyo hadiyado. Waxaan telefoonka kula xiriiray dadkan meesha aan aad uga carooday oo aan ku celceliyay "xisaabteyda ka noqo" in ka badan iyo in ka badan ilaa ay ka adeecaan.
Dadyohow, haddii kani yahay kanagii istaraatijiyad haynta, waxaad haysaa xoogaa shaqo ah inaad qabato. Iyo, waxaad qarinaysaa dhibaatooyinka alaabtaada ama adeeggaaga adigoo qarinaya haynta macaamiishaada dhabta ah. Jooji! Tirtirida wax soo saar ama adeeg waa inay ahaataa sida ugu fudud ee mid uun loo saxiixo.
Agoosto 27, 2012 saacaddu markay ahayd 7:26 PM
Aad ayey ii dhibeysaa markaan arko taas. Mar alla markii aan helo e-mayl leh xiriir xun oo ka-saaris ah waxaan u calaamadeeyaa inay tahay spam haddii aysan taasi waxna ka tareynin, abuur sharci aad ku tirtirto isla goobta.